एकल महिला समूहको अध्यक्षमा अधिकारी चयन - Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper Daraundi Gorkha's No. 1 Newspaper
Published On : २ आश्विन २०७८, शनिबार १८:०७
मानव अधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूह गोरखाको चौथो अधिवेशन सम्पन्न भएको छ ।
निवर्तमान समूहकी अध्यक्ष सरिता ढकालको अध्यक्षता र भगवती कुमालको प्रमुख आतिथ्यतामा शनिबार सम्पन्न अधिवेशनले मिना अधिकारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको छ ।
समूहको उपाध्यक्षमा कल्पना पोखरेल, सचिवमा विनिता श्रेष्ठ ढकाल र कोषाध्यक्षमा सरिता पुडासैनी चयन भएका छन् ।
भेलाले समूहको सदस्यहरुमा उमा खनाल, तारा न्यौपाने, सीता देवकोटा, भगवती कुमाल, सूर्य कुमारी कुँबर, सनिता थापा, फूलमाया गिरी, कमला शर्मा न्यौपाने र सरला बस्नेतलाई चयन गरेको छ । त्यस्तै सल्लाहकार संयोजकमा सरिता ढकाल र सदस्यहरुमा तुलसा मरहट्टा, गौरा कुँबर , ललिता अधिकारी र चण्डिका श्रेष्ठलाई चयन गरेको छ ।
सम्पन्न चौथो भेलाले जिल्लाभरका ११ वटै पालिकामा एकल महिला समूह गठन गर्ने र ९४ वटै वडामा पनि समूहको शाखा गठन गर्ने निर्णय गरेको नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिइन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष अधिकारी यसअघि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, जिल्ला सहकारी संघ, गैरसरकारी संस्था महासंघ, लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघमा रहेर काम गरिरहेकी छन् ।,